Global Voices teny Malagasy · Miranah – Momba ny mpandray anjara
Tahiry isam-bolana Febroary 2015 4 Lahatsoratra
Janoary 2015 1 Lahatsoratra Novambra 2014 1 Lahatsoratra Oktobra 2014 3 Lahatsoratra
Aogositra 2014 1 Lahatsoratra Mey 2014 1 Lahatsoratra Avrily 2014 1 Lahatsoratra Marsa 2014 1 Lahatsoratra Janoary 2014 1 Lahatsoratra Desambra 2013 1 Lahatsoratra Septambra 2013 1 Lahatsoratra Aogositra 2013 1 Lahatsoratra Jolay 2013 2 Lahatsoratra
Marsa 2013 1 Lahatsoratra Febroary 2013 6 Lahatsoratra
Avrily 2012 1 Lahatsoratra Nanomboka nandika tamin'ny 07 Jolay 2011 · 69 Lahatsoratra	imailaka Miranah	Lahatsoratra farany an'i Miranah 12 Febroary 2015
Fijerin'i Karaiba : Ny Fahalalaham-Pitenin'i Charlie Hebdo Manoloana ny Tsy Fahazakana Adihevitra Mpanoratra Flora Thomas · Karaiba Bilaogera Karaibeana Roa Miresaka Fondamentalisma ara-pivavahana ao anatin'ny toe-draharaha fanafihana ny Charlie Hebdo sy ny eritreritra raha fanararaotra izao hiovana fitantaram-potokevitra.
Niresaka Ireo Olana ny Filoham-pirenena Tajika? Nitehaka ny Antenimiera? Mpanoratra Abdulfattoh Shafiev · Azia Afovoany sy Kaokazy Ny Parlemantan'i Tajikistan amin'izao fotoana izao dia ny mitehaka ny filoha sy ny manamafy ny fanapaha-keviny no mba hainy. Aza manantena ny hahita fiovana rehefa tonga ny iray vaovao amin'ny volana marsa.
Nikatso ny Aterineto Tao RDC Nandritra ny Fihetsiketseha-Panoherana an'i Kabila, 36 no Maty Mpanoratra Lova Rakotomalala · Afrika Mainty Nahery vaika ny fifandonana teo amin'ny polisy sy ny mpanao fihetsiketsehana manohitra ny fanitsiana ny lalam-pifidianana nataon'i Kabila izay niafara tamin'ny fahafatesan'olona 36 tao amin'ny Repoblika Demaokratikan'i Kongo tao anatin'izay andro vitsivitsy izay.
Nodimandry teo amin'ny Faha-90 Taonany ny Mpanjaka Saodiana Abdula, ary Dimbiasin'i Salman 70 Taona Mpanoratra Amira Al Hussaini · Afrika Avaratra sy Afovoany Atsinanana Taorian'ny honohono naharitra herinandro maromaro, dia nanambara ny fahafatesan'ny Mpanjaka Abdulla bin Abdulaziz, 90 taona, i Arabia Saodita androany [23 Janoary 2015]. Ankehitriny izy dia dimbiasin'ny rahalahiny Salman, 79 taona.
30 Janoary 2015
Maro Lavitra Noho ny Lalao Baolina Kitra Ny Nalaza Tao Brezily Tamin'ny Taona 2014 Mpanoratra Taisa Sganzerla · Amerika Latina Misy ihany koa ny oroka pelaka hita amin'ny tantara mitohy amin'ny fahitalavitra, ny adihevitra manoloana ny fahavakavahambolonkoditra sy ny fitsaram-bahoaka, hita tao amin'ity firenena lehibe indrindra ao Amerika Latina ity tamin'ny 2014 ihany koa ireo.
Hoy Ny Thailandey Mpianatra tamin'ireo Mpanohitra ao Hong Kong: “Aza Mitsahatra’ Mpanoratra Khun Somchai · Thailandy Tsy ara-dalàna amin'izao fotoana izao ny manao na miditra anaty fihetsiketsehana, saingy nisy vondrom-pianatra Thailandey naneho ny fanohanany ireo mpanao fihetsiketsehana ao Hong Kong nandritra ny resadresaka manokana iray tao amin'ny Google Hangout.
Ho Tapaka Tanteraka Ve Ny Aterineto Ao Hong-Kong? Mpanoratra inmediahk.net · Azia Atsinanana Mety ho tratran'ny fahatapahan'ny tambajotra tanteraka ve i Hong Kong? Milaza ny manampahefana fa mety hitranga izany, saingy sarotra an.
Tapatapa-baovao avy any Syria: Marcell Shehwaro tao anatin'ny fiainan'i Aleppo Mpanoratra Mohamed ElGohary · Syria Marcell Shehwaro dia mibilaogy ao amin'ny marcellita.com ary misioka ao amin'ny @Marcellita, izay samy tamin'ny teny Arabo avokoa no niandohany.